Cnaps: « Tagnamaro » andiany faharoa - ewa.mg
News - Cnaps: « Tagnamaro » andiany faharoa
Tontosa teny amin’ny foiben’ny Tahirim-pirenena misahana ny fiahiana sosialy (Cnaps) eny Ampefiloha ny hetsika « Tagnamaro » andiany faharoa, fanao isaky ny asabotsy fahatelon’ny volana jolay teo. Fotoana nanatanterahana ny politikan’ny fanjakana foibe, sady nanamafisana ny firaisankinan’ny mpiasa rehetra. Resy lahatra ary miombon-kevitra amin’ny hanatanterahana ny « Tagnamaro » ny Cnaps, amin’ny fandraisana andraikitra an-tsitrapo amin’ny maha olom-pirenena, hanehoana ny herimpo hitondra fiovana tsara amin’ny tontolo manodidina.
Nodiovina ny tao anatiny, ny ivelany ary ny manodidina ny toeram-piasana.
Nilaza ny talen’ny fitantanana ny maha olona ao amin’ny Cnaps, Raobijaona Bruno, fa “porofo fa manaraka ny toromariky ny fanjakana ny Tahirim-pirenena ary efa fanindroany ity fiaraha-mientana ity”.
L’article Cnaps: « Tagnamaro » andiany faharoa a été récupéré chez Newsmada.
Nivoaka tamin'ny : 06/08/2019
Tanjombato: tratran’ny polisy ireo andian-jiolahy mpanendaka gagilahy
Saron’ny polisy miasa ao amin’ny commissariat central (CC) Tanjombato, ny 21 marsa 2021 ireo andian-jiolahy malaza ratsy amin’ny fanendahana an-tampon-tanànan’i Tanjombato. Raha ny tatitra nampitain’ny polisy, nahazo loharanom-baovao izy ireo fa misy toerana fieren’ireto jiolahy ireto ao an-tampon-tanànan’i Tanjombato, akaikin’ny Analamanga Hotel. Nidina teny an-toerana avy hatrany ny polisy nanamarina ny zava-misy. Tratra tao amina trano iray izy dimy lahy ireto. Nentina tao amin’ny CC Tanjombato izy ireo mba hanaovana fanadihadiana. Mifanandrify tamin’io fotoana io nahatrarana azy dimy lahy io, naharay fitoriana mikasika fanendahana ny avy ao amin’ny polisy, ny zoma hariva. Rehefa naseho ny mpitory ireto jiolahy tratra ireto dia nanamarina izy ireo fa ireo tokoa no nanendaka azy tamin’io zoma hariva io. Nomarihin’ny polisy fa anisan’ireo tambajotra mpanao asa ratsy fanendahana eny amin’iny faritra Tanjombato sy ny manodidina iny ireto jiolahy ireto. Mbola misy naman’izy ireo karohin’ny polisy amin’izao, araka ny fanazavana voaray. Taorian’ny fanolorana azy ireo ny fampanoavana, naiditra eny amin’ny fonjan’Antanimora ry zalahy ireto.Jean Claude L’article Tanjombato: tratran’ny polisy ireo andian-jiolahy mpanendaka gagilahy a été récupéré chez Newsmada.
Pilo kely #4490 aroson’i Mamy Be
L’article Pilo kely #4490 aroson’i Mamy Be est apparu en premier sur AoRaha.
Hetsiky ny fanoherana: tsy manda fifanarahana politika ny Vondrona Panorama
Nikaonan-doha tetsy Andraharo ny Vondrona Panorama ny asabotsy teo. Nanambara izy ireo fa mijoro hanohitra ny fitondrana ary tsy hiray tsikombakomba manoloana izao fomba fiasa izao. Na izany aza, naneho fahavononana izy ireo raha misy ny fifanarahana politika. « Tsy manda fifanakalozan-kevitra izahay raha ho an’ny tombontsoan’ny firenena sy andraisan’ny maro anjara. Tsy fitadiavan-tseza anefa izany fa hanavotana ny vahoaka ary fandraisana andraikitra », hoy ny avy amin’ny OHT, Rakotoarisoa Didier. Nanambara kosa ny avy amin’ny DHD, Rasamoelina Harinaivo, fa tsy manohitra na mitsabaka amin’ny vondrona mpanohitra hafa izy ireo. Hametraka ny fomba fanaovana politika vaovao izy ireo. Miala amin’ny fitiavan-tseza sy manana fomba fijery ahazoana manatsara ny fiainan’ny firenena, araka ny nambarany. « Tsy variana amin’ny fitadiavan-toerana fa firosoana amin’ny fakana fahefana hanatanterahana foto-kevitra. Tsy mivavaka amin’ny olona na manohana fa manohana fomba fijery. Anton’ny fitambarana izany », hoy izy ireo.Synèse R. L’article Hetsiky ny fanoherana: tsy manda fifanarahana politika ny Vondrona Panorama a été récupéré chez Newsmada.
Ambositra: tokantrano roa voatafika tanaty ora iray
Nitrangana fanafihana indroa nisesy tao amin’ny renivohitr’Amoron’i Mania, omaly maraina tokony ho tamin’ny 1 ora. Lasibatry ny jiolahy manodidina ny enina nirongo basy sy sabatra ny tokantrano iray ao Ampitahana ka voaroba ny entana maro isan-karazany, ny finday iray ary ny vola 20 000 Ar. « Niditra an-keriny tao amin’ireo tompon-trano ireo jiolahy ka nanao ny asa ratsiny » hoy ny fanazavan’ny zandary mpanao famotorana. Nambarany fa naheno ny tranga ireo mponina eo amin’ny manodidina, saingy tsy nisy nahasahy namonjy ireo voatafika noho ny tahotra. « Efa lasa ireo olon-dratsy vao nampandre anay ireo mponina. Tsy nisy nahita ny lalana nalehan’ireo olon-dratsy », hoy hatrany ny fanazavana.Ankoatra izay, mpivarotra mpamongady iray ao Atsinanan’i Vinany, voatafiky ny jiolahy maro nitondra basy mahery vaika tamin’io fotoana io ihany. Nampihorohoro ireo tompon-trano izy ireo. «Voaroba avokoa ny vola voaangona tao anatin’ny iray andro », hoy ny fanazavan’ny polisy ao an-toerana, misahana ny famotorana. Mbola norahonana ho faty koa ireo tompon-trano raha vao mampandre ny mpitandro filaminana. Nanapoaka basy inefatra ireo jiolahy raha vao tafavoaka ny trano. Henintsoa HaniL’article Ambositra: tokantrano roa voatafika tanaty ora iray a été récupéré chez Newsmada.
Avy nizara fanampiana teny Analakely…: norobain’ny jiolahy ireo tanora mpanao asa soa
Lasibatry ny andian-jiolahy nirongo basy, tokony ho tamin’ny 1 ora maraina teny amin’ny Tranodimy Anosi­patrana, ireo tanora mpanao asa soa. Lasan’ireo mpanendaka avokoa ny akanjo hatramin’ny telefaonina finday sy ny peratra ary ny fivaraka. Raha ny tatitra voaray, avy nizara fanampiana ho an’ireo fianakaviana sahirana teny Analakely, teny Ambohidady sy ny manodidina izy ireo ka teny an-dalana hody no nifanehatra amin’ireo jiolahy. Miala eo amin’ny “rond-point” farmasia Volahanta Anosibe ary mivoaka eny amin’ny masera Anosipatrana ity lalana nisehoan’ny asan-jiolahy ity. Nanatitra tanora iray voalohany ny fiara Sprinter nitondra azy ireo no efa tsikaritr’ireo tao anaty fiara fa misy andian’olona manaraka amin’ilay lalana. Tsy hita tampoka teo anefa ireo andian’olona ireo. Afaka ny tetezana Tranodimy, nanatitra ny tanora iray faharoa ny fiara. Teo am-piaingana ny fiara no nohodidin’ireo jiolahy nandrangaranga basy sy antsy. Nambanan’izy ireo ba­sy ny mpamily ka tsy afa-nihetsika. Nalain’ireo jiolahy ny fanalahidin’ny fiara ka na­tsipin’izy ireo teny amin’ny arabe. Nanara-po naka izay azo nalaina tamin’ireo olona tao anaty fiara ry zalahy.J.CL’article Avy nizara fanampiana teny Analakely…: norobain’ny jiolahy ireo tanora mpanao asa soa a été récupéré chez Newsmada.